I-China ephathekayo ye-Ultrasonic transducer i-Impedance analyzer Isixhobo sokulinganisa seParameter yokuvelisa kunye neFektri | Qianrong
I-Ultrasonic transducer i-Impedance analyzer yokulinganisa isixhobo seParameter
Ephathekayo, 8inch screen, Full touch screen
Zonke iiparameter, igrafu
5s / ipasi elinye one600indawo yokuskena
I-10 de 40degree yesenti
Isicwangcisi secandelo lokuhlalutya i-QR520A uthotho lweemveliso zeentlobo ezahlukeneyo zezixhobo ze-ultrasonic zokulinganisa izinto, kubandakanya iipeyileelectric ceramics, ii-transducers, oomatshini bokucoca i-ultrasonic, umatshini weplastiki we-welding, i-acoustic engaphantsi kwamanzi, izixhobo ze-magnetostrictive, i-grinder ye-ultrasonic, i-atomization ye-ultrasonic, ukucoca i-ultrasonic, ukuguqula iradar, Ukujikeleza kwe-ultrasonic, i-phacoemulsification, ukucocwa kwe-ultrasonic, ii-motors ze-ultrasonic, kunye nakho konke ukusetyenziswa kwezixhobo zepiezoelectric kunye nee-ultrasonic kunye nezixhobo.
1. Isikrini esikhulu, isikrini esigcweleyo esichukumisayo, esenza i-QR520A zombini i-QR70A-P (uguqulelo lwekhompyuter) amava okusebenza, kwaye akukho bunzima ngengqondo yokusebenza kwekhompyuter.
2. Ukuxhomekeka kumthamo omtsha wokucwangciswa kwedatha ye-ARM, i-QR520A yokuchaneka kwemilinganiselo iphezulu kakhulu kune-QR70A-D (enenguqulo yokubonisa), inokufikelela kwinqanaba le-QR70A-P (uhlobo lwekhompyuter).
3.Ukusebenza okupheleleyo kwescreen kusebenza ngakumbi, akusafuneki ukuba yi-QR70A-D (eyakho inguqulelo yokubonisa) inani elikhulu lamaqhosha omzimba, yiyo loo nto izixhobo zokusebenza ziba lula kakhulu, ubungakanani bemveliso buncinci, bukhaphukhaphu kwaye buphathekayo.
4. Ukudibanisa ikhompyuter ukuze isebenze njenge-QR70V-P. Isoftware iyahambelana ngokupheleleyo, umsebenzisi akasasebenzi ngokusebenza kwesoftware.
1. IYunivesithi yaseTsinghua kunye neZiko laseTshayina leZiko lezeNzululwazi kwi-Acoustics ngokudibeneyo kuphuhliswe itekhnoloji.
2. Ukusukela ngo-2001, uthotho lweemveliso zethu kwintengiso ye-QR60A / 70A luyiminyaka eli-15, amawaka abathengi besebenzisa kolu shishino, sele ingumbandela wokulinganisa umgangatho kumgangatho we-ultrasound.
3.Kule minyaka ili-15 idlulileyo, ngaphezulu kwe-200 iikholeji neeyunivesithi bezisebenzisa izixhobo zethu, kuba zihlala zinezixhobo ze-Agilent ezingeniswe ngaphandle, ezingama-4294A. Izixhobo zethu ziye zavavanywa amatyeli amaninzi ngezixhobo ze-Agilent ezingenisiweyo. Kuyavela ukuba iziphumo zezixhobo zethu zithembekile ngokupheleleyo.
4. Izixhobo zethu zisetyenziswe ziinkampani ezininzi zovavanyo zaseJamani nase-US njengezixhobo zovavanyo. Isixhobo sisitshixo kulawulo lomgangatho. Ukuba sikhetha isixhobo esenziwe ngesiTshayina. Kufuneka simisele ngokusekwe kukuthenjwa ngokupheleleyo.
Egqithileyo I-40Khz ye-Ultrasonic yeNano Spray Isixhobo esineFrithi yokuBekwa kweRhafu ePhindwe ngokuQhelekileyo yokuKhwela kweFlu
Okulandelayo: I-20Khz ye-Ultrasonic eyenziwe ngokwezifiso iphondo le-Welding nge-Anodizing Treatment
3000W Hot-unyibilike ukutywina Welding yeplastiki End C ...